Thein Sein | Freedom News Group
4 Comments	ခွဲခြား ဆက်ဆံ မှု တွေ ရုပ်သိမ်း ဖို့အမေရိကန် ပြော
တစ်အိမ်ထောင် မှာ ကလေး နှစ်ယောက် သာ ယူ ရ မယ် ဆို တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် မိသားစု
တွေ ကို ရခိုင် ပြည်နယ် မှာ ခွဲ ခြား ကန့် သတ် တာ ကို ရုပ်သိမ်း ဖို့အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Jun 15
ဇွန် လ ၁၅ ရက်နေ့မြန်မာ နိုင်ငံ တ၀ှမ်း ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည့် သတင်း များ ကို အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထား
ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မငြိမ်သက်မှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့ ရာ စစ်တွေ မြို့ တွင် စားနပ် ရိက္ခာ ပြတ်လပ် လုနီးပါး Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Apr 4
4 Comments	Burma Soldier က မြန်မာ စစ်တပ် သရုပ်မှန် ကို အထုပ်ဖြေ
ကိုဦး၊ ၊ယနေ့ညပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်များကလပ်တွင်
မြန်မာစစ်သားဟောင်း မျိုးမြင့်ရဲ့ “မြန်မာစစ်သား” (BURMA SOLDIER) ဇာတ်ကားကို ပြသခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော်ဖြစ်ပွါးနေသော ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ကြုံတွေနေရ သော ဘေးဒုက္ခများနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Click to share on LinkedIn (Opens in new window)Share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Click to email (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to print (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on Tumblr (Opens in new window)Like this:Like Loading...	Mar 30
2 Comments	Myanmar military rule ends, but army retains grip
YANGON — Myanmar’s military handed power toanominally civilian government after almost
50 years in power Wednesday, as the ruling junta was disbanded andanew president appointed.
Myanmar state television reported the junta’s State Peace and Development Council (SPDC)
“has been officially dissolved”, quoting an order signed by Senior General Than Shwe. Read more
2 Comments	ဘန်နဒစ် ရော်ဂျာ ကို နိုင်ငံ တွင်းမှ နှင်ထုတ်
မြန်မာ စစ်ခေါင်း ဆောင် ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး သန်းရွှေ အကြောင်း ကို (Than Shwe, Unmasking Burma’s Tyrant)
ဆိုသည့် အမည် ဖြင့် စာအုပ် ထုတ်ဝေ ရေးသားခဲ့သည့် အနောက် နိုင်ငံသား လူ့ အခွင့်အရေး တက်ကြွသူ
နှင့် သတင်းစာ ဆရာ တစ်ဦး ကို မြန်မာ စစ်အစိုးရ က ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ညနေ က နိုင်ငံ တွင်း မှ နှင် ထုတ်လိုက်
သည် ဟု မိုးမခ အင်တာနက် စာမျက် နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ Read more
15 Comments	ကြံ့ဖွတ် ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သိန်းစိန် သမ္မတ အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရ
Junta Chief Pick Up his loyalist follower as President of Burma Image by Prachatai via Flickr
၁၉၉၆ ခုနှစ် တွင် အသစ်ဖွဲ့ စည်း သည့် တြိဂံ တိုင်းဥ Read more
Total Visitors:Since 16 December 2008	10,726,695 hits